High Sierra Betas, Xarunta Macluumaadka Ireland, Denise Young, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadkan waxaan leenahay daahfurka laba nooc oo isku xigta beta oo ku saabsan macOS High Sierra 10.13.2, kii ugu horreeyay isla Isniinta iyo tan xigta, oo ahayd nooca beta 4 ee nidaamka horumariyaha, ayaa yimid habeenkii Khamiista. Marka lagu daro noocyadan beta ee loogu talagalay Mac, Apple waxay sii deysay nooca ugu dambeeya ee iOS 11.1.2 iyada oo xalka dhibaatooyinka kala duwan sida "qabowga" shaashadda, iwm.
Shaki kuma jiro bishaan november waa mid xiiso leh sida wararka la xiriira shirkadda tufaaxada la qaniinay. Laakiin aan si faahfaahsan u aragno wararkaas in yar ka soo baxay ee aan ka imid Mac.
Beta-kii ugu horreeyay ayaa la sii daayay Isniintii la soo dhaafay iyo ka dib macOS High Sierra beta 4 Khamiis waa laba ka mid ah wararka muuqda. Mana aha sababta oo ah noocyadan cusub waxaan ka helaynaa isbeddello waaweyn marka la barbar dhigo beta-kii hore ee loogu talagalay kuwa horumariya, waa asal ahaan sababtoo ah soo noqnoqoshada bilaabida kuwan.
Dhinaca kale waxaan leenahay daahfurnaan heer sare ah toddobaadkan, taasina waa dhowr bangi iyo hawlwadeenka Orange ku dar is waafaqsanaanta Apple Pay. Openbank, Orange Cash iyo N26 waxay horeyba u heli karaan macaamiishaada.
Warka kale ee aadka u fiican waa midka soo muuqda toddobaadkan ee la xiriira Xarunta xogta Apple ee Ireland. Waxay u muuqataa in xaruntan Ireland aan la dhisi karin sida agaasimaha guud ee Apple laftiisu uu ku sharaxayo wareysiga, wuxuu ku xaqiijiyay arintaas hada ma oga goorta shaqooyinka dhismuhu bilaabmi doonaan.
Ugu dambeyntiina waxaan ka tagaynaa warka jimcihii la soo dhaafay kaas oo madaxweyne ku xigeenka kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada Apple uu ku dhawaaqayo kaasoo ka tagi doona shaqadiisa dhamaadka sanadka. Denise Young, ayaa ka tagi doonta shirkadda 7 bilood ka dib markii uu bedelay jagooyin ka tirsan shirkadda Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » High Sierra Betas, Xarunta Macluumaadka Ireland, Denise Young, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple wuxuu kordhiyay Barnaamijka Dayactirka Bilaashka ah ee 2013-2015 MacBook Pros